After death of Cecil the lion outside unfenced reserve, Zimbabwe resolves to protect wildlife | Fox News
After death of Cecil the lion outside unfenced reserve, Zimbabwe resolves to protect wildlife
Elephants roam freely near the railway track that Cecil the lion crossed when he was lured onto a farm in an alleged illegal hunt in Hwange about 700 kilometres south west of Harare, Zimbabwe, Thursday, Aug. 6, 2015. Cecil had to cross only a set of railroad tracks to go from a protected area to a kill zone. The killing of Cecil by an American hunter triggered outrage far beyond Zimbabwes boarders and has strengthened resolve to enforce regulations governing hunting. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi) (The Associated Press)
Lion researcher, Brent Staplekamp, holds an antenna while standing on the tracks that Cecil the lion crossed when he was lured onto a farm in an alleged illegal hunt in Hwange about 700 kilometres south west of Harare, Zimbabwe, Thursday, Aug. 6, 2015. Cecil had to cross only a set of railroad tracks to go from a protected area to a kill zone. The killing of Cecil by an American hunter triggered outrage far beyond Zimbabwes boarders and has strengthened resolve to enforce regulations governing hunting. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi) (The Associated Press)
Giraffes drink water from a water point near where Cecil the lion crossed when he was lured onto a farm in an alleged illegal hunt in Hwange about 700 kilometres south west of Harare, Zimbabwe, Thursday, Aug. 6, 2015. Cecil had to cross only a set of railroad tracks to go from a protected area to a kill zone. The killing the Lion by an American hunter triggered outrage far beyond Zimbabwes borders and has strengthened resolve to enforce regulations governing hunting. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi) (The Associated Press)